IChippa neBay banindwa yigazi lenyama abangayidlanga - Impempe
IChippa neBay banindwa yigazi lenyama abangayidlanga
June 14, 2021 June 14, 2021 Impempe.com
Abadlali beChippa Unite o-Andile Mbenyane, Kurt Lentjies no-Oupa Manyisa
Impicabadala yecala eliphakathi kweRoyal AM neSekhukhune United akubangazeki ukuthi iwaphazamisa kakhulu amaqembu azodlala imidlalo yokuhlunga angangene kuyo yonke le nto.
IChippa United, eqede endaweni ka-5 kwiDStv Premiership, neRichards Bay FC, eqede endaweni yesithathu kwiGladAfrica Championship, bayaqhubeka nokuziqeqesha kodwa abazi ukuthi izodlalwa nini imidlalo yokuhlunga.
NgoMgqibelo inkantolo enkulu yaseGoli ikhiphe isinqumo esivune iSekhukhune United, nokuchaza ukuthi iRoyal AM yiyona ezodlala kweyokuhlunga. Empeleni ngokohlu olukhishwe yiPremier Soccer League (PSL) ngoMgqibelo, iRoyal AM izodlala neRichards Bay FC emdlalweni wokuqala eMhlathuze Sports Complex, ngoLwesibili ngo-3 ntambama.
Nokho lokho kubukeka kungeke kwenzeke ngemuva kokuthi iRoyal AM idlulisele icala enkantolo ephakeme ngeSonto. Okulwelwa yileli qembu laKwaZulu-Natal ukuthi lona lidlale imidlalo engu-30 layiqeda, lagcina liphezulu kwilogi.
Nakhoke iSekhukhune seyinikwa amaphuzu amathathu ngemuva kokuwina icala layo nePolokwane City, kwasuka ukukhuluma.
UMorgan Mammilla, oyimenenja yeChilli Boys, uthe umsebenzi uyaqhubeka kubona yize kunenzukazikeyi phakathi kwiRoyal AM neSekhukhune, okuyinto ezoyiphazamisa nakanjani imidlalo yokuhlunga.
“Akukho nokuncane esingakusho ngalokho (icala) thina. Siyaqhubeka nokuziqeqesha njengokujwayelekile. Abadlali bebhola elikhokhelayo abaphumuli vele, bahlezi beziqeqesha ukuze bahlale besesimweni esihle,” kusho uMammilla.
“Abadlali basesimeni esihle somqondo futhi uma ubheka amarekhodi ethu uzobona ukuthi akusifaneli ukuba lapho sikhona. Okusijabulisayo nje ukuthi sisekhona kwiPremiership okwamanje, sizolithola ithuba lokulwela ukuhlala.”
IChippa kumele ibhekane neRichards Bay emdlalweni wesibili ngoLwesihlanu ngo-3 ntambama. Yinto okubukeka ingeke yenzeke leyo njengoba icala leRoyal AM neSekhukhune liqhubeka nje. Kulindeleke isinqumo sejaji ngokuthi liyavuma yini ukuba imiswe le midlalo ngoMsombuluko.
Previous Previous post: Sekubambe imali ukuthi uHunt ajoyine iStellies
Next Next post: Usebakhumbule abalandeli uNcikazi we-Arrows